पशु बलि निषेध गर्न माग गर्दै धर्ना » खबरहरुको एउटै केन्द्र
पशु बलि निषेध गर्न माग गर्दै धर्ना
शनिबार, चैत्र १२, २०७३ ०७:५५ मा प्रकाशित !
१२ चैत, काठमाडौँ । अहिंसा प्राणी शाकाहारी समाजले मन्दिरमा पशु बलि निषेध गर्न माग गर्दै आज कामपा, नक्साल, भगवतीबहालस्थित भगवती मन्दिरमा धर्ना दिएको छ ।
समाजका अध्यक्ष विकेश श्रेष्ठले मन्दिरमा गरिने पशु हिंसाले सर्वसाधारण मानिसको मनमा चोट पु¥याउने भएकाले त्यसमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालमा पशु बलि गर्नेमा देशको कुल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशत पनि नरहेको जिकिर गर्दै शान्ति स्थापनाका लागि प्राणी हिंसा बन्द गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
विसं २०७२ जेठ १६ गते दक्षिणकालीबाट सुरु भएको सो अभियान निरन्तर सञ्चालन गरिने बताएको छ । देशभर रहेका बलि चढ्ने करिब एक हजार मन्दिरमा धार्मिक गतिविधि गरी अभियान पु¥याइने अभियानकर्मी दुर्गानाथ दाहालले जानकारी दिए ।
PREVIOUS POST Previous post: राष्ट्रपतिद्धारा दुई विधेयक प्रमाणित
NEXT POST Next post: दर्जनौँ हातहतियार तथा विस्फोटक पदार्थ फेला
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शनिबार, चैत्र १२, २०७३ ०७:५५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शनिबार, चैत्र १२, २०७३ ०७:५५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शनिबार, चैत्र १२, २०७३ ०७:५५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शनिबार, चैत्र १२, २०७३ ०७:५५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शनिबार, चैत्र १२, २०७३ ०७:५५